people Nepal » पाकिस्तान प्रिमियर लिगको ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रिमियर लिगको ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछाने – people Nepal
पाकिस्तान प्रिमियर लिगको ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछाने
Posted on October 5, 2018 by Durga Panta
असोज १९, काठमाडौं ।विश्व क्रिकेटमानै ब्यस्त खेलाडीका रुपमा रहेका सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रिमियर लिग (पीएसएल) को ड्राफ्टमा समेत परेका छन्। नेपालका युवा लेग स्पीनर लामिछाने गत वर्ष आइपिएल खेलेपछि निरन्तर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटका घरेलु संरचनामा ब्यस्त रहेको छ।
पीएसलको ड्राफ्ट अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्टिभ स्मिथ,साउथ अफ्रिकाका पूर्व कप्तान एबी डि भिलियर्स सहित ५०० जना खेलाडी ड्राफ्टमा परेका छन्। ड्राफ्टमा कुन कुन खेलाडी रहेका छन् भनेर आधिकारीक रुपमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
तर सन्दीपको नाम भने ड्राफ्टमा रहेको नेपाली टोलीका टेक्नीकल म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। पिएसएल आगमी फेब्रुअरीमा आयोजना हुने छ। जसमा टोलीको सहभागिता रहने छ। गत संकरणको ड्राफ्टमा परेपनि कुनै पनि टिमले सन्दीपलाई भाउ लगाएका थिएनन्। तर यो पटक सन्दीप संभावाना अत्याधिक रहेको छ।
गत संकरणको पिएसएलको उपाधि इस्लामबाद युनाइटेडले पेशावर जल्मीलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै जितेको थियो। आइपीएलमा दिल्लीबाट व्यवसायिक क्रिकेट थालेका सन्दीपले ग्लोबल टी–२०, क्यानेडियन लिग, क्यारेवियन प्रिमियर लिग जस्ता विश्वचर्चित लिगमा खेली सकेका छन्। त्यस्तै अफगानिस्तान प्रिमियर लिग र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा आयोजना हुने टी–१० मा पनि अनुबन्ध भई सकेका छन्।
बार्सिलोनाको नयाँ होम जर्सी सार्वजनिक, समर्थकहरुद्वारा चर्काे आलोचना !
नेयमारमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप !
सन्दीप बार्बाडोसबाट खेल्ने, भए महँगो मूल्यमा ‘विक्री’